China Kitchen Equipment umzi-mveliso kunye nabavelisi |TSIBA
Izixhobo ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo ekhitshini ezixhasayo ziquka: izixhobo zokungenisa umoya, ezifana nesigqubuthelo somsi senkqubo yokukhupha umsi, umbhobho womoya, ikhabhinethi yomoya, isicoci se-oyile esicoca umsi werhasi emdaka kunye nokucocwa kwamanzi amdaka, isahluli se-oyile, njl.
Izixhobo zasekhitshini zibhekisa kwizixhobo kunye nezixhobo ezibekwe ekhitshini okanye ekuphekeni.Izixhobo zasekhitshini zihlala zibandakanya izixhobo zokufudumeza ukupheka, izixhobo zokusebenza, izixhobo zokubulala iintsholongwane kunye nokucoca, ubushushu obuqhelekileyo kunye nezixhobo zokugcina ukushisa okuphantsi.
Indawo ezisebenza ekhitshini kwishishini lezokutya zahlulwe zaba: indawo yokugcina ukutya esisiseko, indawo yokugcina impahla eyomileyo, igumbi lokutyela, igumbi lokutya, igumbi lokutya, igumbi lokutyela, igumbi lokutyela elibandayo, igumbi lokulungisa imifuno, inyama kunye negumbi lokulungisa iimveliso zasemanzini. , igumbi lokulahla inkunkuma, igumbi lokusika kunye nelokufanisa, indawo ye-lotus, indawo yokupheka, indawo yokupheka, indawo yokutya, indawo yokuthengisa kunye nokusabalalisa, indawo yokudlela.
1).Indawo yekhitshi eshushu: isitovu segesi, ikhabhinethi eqhumayo, isitovu sesuphu, isitovu sokupheka, ikhabhathi eqhumayo, isitovu sokwazisa, i-oveni yemicrowave, ioveni;
2).izixhobo zokugcina: yahlulwe inxalenye yokugcina ukutya, ishelufu flat, irayisi kunye nekhabhathi noodle, itafile ukulayisha, izixhobo zokugcina inxalenye, ikhabhinethi isinongo, workbench yokuthengisa, ikhabhathi ephantsi ezahlukeneyo, ikhabhinethi eludongeni, ikona ikhabhathi, multi-functional ikhabhathi zokuhombisa, njl;
3).Izixhobo zokuhlamba kunye ne-disinfection: inkqubo yokubonelela ngamanzi abandayo kunye ashushu, izixhobo zokuhambisa amanzi, isitya sokuhlamba, i-dishwasher, ikhabhinethi yokushisa i-disinfection ephezulu, njl.
4).Izixhobo zokulungisa: ubukhulu becala itafile yokulungisa, ukugqiba, ukusika, izithako, izixhobo zokumodareyitha kunye nezixhobo;
5).Oomatshini bokutya: ikakhulu umatshini womgubo, i-blender, i-slicer, i-egg beater, njl.
6).Isixhobo sokukhenkcisa: isibandisi sesiselo, umenzi womkhenkce, isikhenkcisi, isikhenkcisi, isikhenkcisi, njl.njl;
7).Izixhobo zokuthutha: i-elevator, i-elevator yokutya, njl.
Izixhobo zasekhitshini zinokwahlulwa zibe ziindidi ezimbini ngokosetyenziso lwendlu kunye nezorhwebo.Izixhobo zasekhitshini zasekhaya zibhekisa kwizixhobo ezisetyenziswa kwikhitshi losapho, ngelixa izixhobo zasekhitshini zorhwebo zibhekisa kwizixhobo zasekhitshini ezisetyenziswa kwiindawo zokutyela, iibhari, iivenkile zekofu kunye namanye amashishini okutya.Izixhobo zekhitshi zentengiso ngenxa yokusetyenziswa rhoqo rhoqo, ngoko umthamo ohambelanayo mkhulu, amandla makhulu, nawo anzima, ngokuqinisekileyo, ixabiso liphezulu.
Ngaphambili: Izixhobo zeentlanzi ezinkonkxiweyo
Okulandelayo: Umatshini weCandy othambileyo
Isilinda esinye esinamavili amane uMvuni woMbona omncinci...
Ubonelelo ngoomatshini boMzimveliso we-Ice Cream oZelweyo...
Ngaba iWasher eSetyenzwayo iTinplat ekumgangatho ophezulu...
Isiselo kunye nohlobo lweSnack olubandayo loMatshini wokuthengisa iWi...
Umatshini wokuthengisa iPizza Umatshini wokuziSebenzisa wePizza